12 Ciyaaraha Madal tayo sare leh ee 2016 | Androidsis
Noocyada qaab-dhismeedyadu waa hal ee ugu wax soo saar badan, inkasta oo ay leedahay waxyaabo u gaar ah oo ay si wanaagsan ula jaanqaadi karto mid kale oo loo yaqaan oradyahan aan dhammaad lahayn oo mararka qaarkoodna aanan si fiican u garanayn waxa aan ciyaareyno. Labaduba si fiican ayey isugu dhafan yihiin taas macnaheedu waa mararka qaarkood waxaan helnaa cinwaano runtii aad u fiican. Hareeraha halkan waxaan sida caadiga ah ku xusnaa qaar leh tayo aad u wanaagsan waana taleefankeena casriga ah ee jecel nooca ciyaarta fiidiyowga laftiisa sababtoo ah sahlanaanta bilaabida iyaga oo aan lahayn wax qabad la'aan.
Liiska 12 fiidiyow oo cusub oo fiidiyow ah oo ku jira boostadan ayaa ah mid aad u xiiso badan oo tilmaamaya inay yihiin oo dhan waa lacag la'aan, inkasta oo ay haa tahay, moodeelka 'freemium model' wuxuu ugu sarreeyaa xagga xayeysiinta, micropayments ama noocyada kale ee dhinacyada si ay horumariyayaashu u sii wataan bilaabitaankooda. Waxaan sidoo kale u helnaa Studiosyada 'Nitrome' iyo 'Noodlecake Studios' inay yihiin labo ka mid ah khubarada noocan ah iyo in cinwaankooda qaarkood aysan ka maqnayn liiskan. Aynu baranno iyaga sidoo kale waxaad fiirin kartaa fiidiyowga oo mid waliba sifiican u tusaya.
2 dulinka 2
3 Isku day inbadan
4 Maalinta baxdaa
5 Geki yaba
6 Super Phantom Cat
7 Xayawaanada gantaallada waaweyn
8 Ha laba jibaarin
9 Elvin: wareega biyaha
11 Shaarib Super
12 Sheeko Bisad Knight
Waxay macquul tahay inay tahay tan ugufiican liiska waxayna na hor dhigeysaa ciyaar ciyaar taas oo ah sheyga fiisikiska waxay leedahay meel fiican oo maskaxdeena lagu afuufo qaar ka mid ah dabinadiisa, makaanikada, iyo horumarka. Ma fiicnaan karin qayb labaad oo ka mid ah Badland oo iyaduna leh mid u gaar ah oo si aan macquul ahayn naloo xiro.
Soo Degso Badland 2 APK
Orodyahanka aan dhammaadka lahayn iyo dhufto ee isku dhafan oo loogu talagalay ciyaar fiidiyoow ah waxay u horseedaa cybernetic iyo sheydaanka sheydaanka. Baro inaad si deg deg ah uga degto xarumaha adag ee cilmi baarista si aad uga baxdo iyadoo nool. Waxa xusid mudan waa aaladaha tiknoolajiyadda sare ee tijaabada ah oo aad ku heli doontaan awoodo gaar ah.
Developer: Nekki - Waxqabadka iyo Ciyaaraha La Dagaalanka
Isku day inbadan
Noodlecake Studio ayaa dhawaan noo keenay Isku day Harder, madadaalo madadaalo u ah xaqiiqda ah in markasta oo aan dhimanno, anaga mayd baa is dul taagi doona sidaa darteed, markay jiraan kuwo badan, waxaan u adeegsan karnaa inaan ku dul boodno goobtaas wax innaga adag. Faahfaahin weyn iyo xoogaa waalli ah Isku day Harder.
Nitrome ayaa mas'uul ka ah barnaamijkan madadaalo ee u muuqda inuu haysto maalin kasta heer cusub, sidaa darteed nuxurkeeda waa la cusbooneysiiyay si aanan marna uga caajisin astaamaheeda, cadawgeeda iyo dabin kala duwan. Madal midabkeedu ka buuxo oo aan sinnaba u seegi karin.
Ciyaar Chillingo ah oo aad kabaha ku qaadan doontid gnome saaxiibtinimo oo ujeedkeedu ugu weyni yahay badbaadinta boqortooyada, badbaadinta gabadha iyo soo qaado sharaabaadyada qaarkood. Ciyaar aan caadi aheyn oo leh taabasho qosol leh oo kaa horgeyn doonta heerarka sheydaanka 100, awoodaha gaarka ah iyo faahfaahin kale oo aad u xiiso badan.
Un Retro 2D platformers taasi waxay kuu geyn doontaa kuwii hore iyo taasi waxay leedahay waxyaabo badan oo Nintendo Super Mario ah. Waxaad qaadanaysaa doorka bisadaha cad ee isku dhex gali doona adduunka cirfiidka iyo taas oo sir badan, tacabur iyo barnaamijyadaas mudada dheer la sugayay ay sugayaan.
Developer: Ciyaaraha Veewo
Xayawaanada gantaallada waaweyn
Waxay ku xasuusinaysaa waxyaabo ka mid ah Jetpack Joyride waxayna leedahay taxane aad u xiiso badan oo ah waxyaabo gaar ah. A Waxaan ku ciyaaraa midab badan, 4 adduunyo kala duwan iyo in ka badan 20 heerar oo lagu ciyaaro bilaa dhammaad. Furo 7-ka xayawaan ee adiga ku sugaya iyo sidoo kale koofiyado iyo waji-badan.
Developer: Ciyaaraha Habka
Ha laba jibaarin
Mid ka mid ah ciyaaraha orodyahan aan dhammaad lahayn oo liiska ku jira Taasina waxay leedahay xoqid aad u weyn: waa inaad sawiraysaa aaladda daruuriga ah ee loogu talagalay jilaayaashu inay dhex marto. Tani waxay u oggolaaneysaa marin u helista ciyaar aad u xiiso badan oo kala duwan oo ku dareysa sawirro aad u fiican.
Elvin: wareega biyaha
Ciyaar fiidiyoow Isbaanish ah oo lagu abuuray fikradda heerarka la abuuray hab farshaxanimo iyo gacanta kuu si aad u barato oo aad u xafido iyaga si markaa aad u dhammaystirto ciyaarta, haddii aad awoodid. Waxay leedahay tiro badan oo jilayaal ah iyo cadawyo, waxayna leedahay waxoogaa naadir ah marka loo eego mid kale sida lo'da duulaysa.
Elvin: Meelaha biyaha
Developer: Ciyaaraha Bisha
Inkastoo tan isagoo helay dhaleecayn badan Sababtoo ah tirada xayeysiiska badan ee ay ku dhex leedahay arjiga, waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican xilligan. Waxay u taagan tahay midabkeeda weyn, animations taxaddar leh, naqshadeynta dabeecadda iyo jawi qurux badan.
Waa macquul ciyaarta u dhow Super Mario liiska. In kasta oo halkan aad isaga hubin karto dhammaan noocyada bastooladaha laysarka si aad ugu adeegsato walxaha iyo cadawga uu helo. Madal leh in ka badan 15 heer iyo 3 adduunyo tayo sare leh.
Sheeko Bisad Knight
Madal ficil-buuxis ah oo aad ku qasbanaan doonto khaldan si aad u ogaatid wadada ku sugeysa. Waxaa ka buuxa godod iyo dabinno, waxaad baran doontaa inaad booddo, duusho oo aad ka booddo marinnada si aad uga fogaato dhammaan caqabadahaas hortaagan.
Developer: Ciyaarta Asura
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » 12 kulan madal cusub oo loogu talagalay Android waa inaad isku daydaa
Moto G4 Plus, falanqeyn iyo ra'yi bil kadib isticmaalkeeda